Ndekọ olu nke ntanetị - Dekọọ ụda na ihe nchọgharị gị
Ndekọ olu nke ntanetị
Dekọọ ụda na ihe nchọgharị gị
Online Voice edekọ-enye gị ohere ka ịdekọ ọdịyo si okwu ozugbo na ihe nchọgharị. Nwere ike idekọ ụda site na ekwentị, mbadamba ma ọ bụ desktọọpụ, ọ bụrụhaala na o nwere ihe nchọgharị na-akwado.
Enwere ike igwu egwu a na ederede na ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ desktọọpụ dị ka faịlụ MP3. The MP3 mkpakọ format-enye oké audio àgwà ebe edebe faịlụ nke gị ọdịyo E Kwunyere.
Site na onye na - edekọ olu anyị, echedoro nzuzo gị kpamkpam: enweghị ozi ọ bụla na-eziga na ịntanetị, olu ma ọ bụ ụda ị na - edekọ anaghị ahapụ ngwaọrụ gị. Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Onye na-edekọ olu anyị bụ n'efu, ọ nweghị ndebanye aha achọrọ ma ọnweghị oke ojiji. Nwere ike iji ya oge niile ịchọrọ, na -emepụta ma na-echekwa ọtụtụ ndekọ ọdịyo dịka ịchọrọ.
Ọ nwere interface mara mma ma dị mfe iji mee ebe ị ga-ahụ ụda ebili mmiri na-acha nwayọọ nwayọọ na-agbapụ.
MP3 (nke akpọrọ MPEG-1 Audio Layer III ma ọ bụ MPEG-2 Audio Layer III) bụ usoro faịlụ agbakọ. Ọ na-eji mkpakọ data efu, nke pụtara na ọ tụfuru akụkụ nke data ọnụnụ ọ na-etinye. Ngwakọta ụda MP3 tụfuru site na mkpakọ MP3 dabara adaba na ụda nke ọtụtụ mmadụ na-anaghị ege. Compdị mpịkọ a gụnyere enweghị ọrụ, mana nke ọtụtụ mmadụ anaghị achọ. Mkpokọta MP3 na-erute ogo 80% na 95% belata nha faịlụ.
Ngwa igwe okwu gị anaghị arụ ọrụ?
Nyochaa Nnụnụ Igwe iji nwalee igwe okwu gị na ntanetị ma chọta ụzọ iji dozie okwu okwu gị na ọtụtụ ngwa na ngwa dị iche iche.
Tọghata ndekọ MP3 gị na usoro ndị ọzọ
Ihe Ntụgharị MP3 na - enye gị ohere igbanwe faịlụ MP3 na WAV, M4A, FLAC, OGG, AIFF. Ọ bụ n'efu na ọ dịghị mkpa nyefe faịlụ!